सुशान्त मृ’त्यु प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट, सीबीआईले रियालाई सोध्यो यस्ता ९ प्रश्न, के दिईन जवाफ ? — sancharkendra.com
१असोज ३ कालो दिन खारेज गरौं ‘आमा’
२आइपीएलकाे १३औं संस्करण आजबाट सुरू हुँदै, उद्घाटन खेलमा चेन्नई र मुम्बई भिड्ने
३असोज ५ देखि खुल्ने भयो आन्तरिक हवाई उडान, यात्रुहरुका लागि यस्तो नयाँ नियम
४नेपालमा स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने विज्ञहरूकाे चेतावनी
५संविधानको कार्यान्वयन आजको महत्वपूर्ण कार्यभार हो : सभामुख सापकोटा
६संविधान दिवसका अवसरमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै
७संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा, कार्यान्यवन र पालन गर्न आफै असफल ओली सरकार
८आज १२ बजेपछि कुन-कुन राशिको फेरिदैछ भाग्य ? हेर्नुहोस यस्तो रहनेछ तपाईको शनिबार
९डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रसंघको महासभामा उपस्थित नहुने
१०कोरोना संक्रमण झनै बढेपछि देशभर लागु हुने भयो यस्तो नयाँ नियम, सरकारको उर्दीसहित
११चस्मा लगाउने मानिसलाई यसकारण कम सर्छ कोरोना
१२प्रहरीको लज्जास्पद हर्कत- कुलमानको पक्षमा बोल्दा लखेटी लखेटी यसरि भयो कु’टपि’ट, भिडियोसहित
एजेन्सी । चर्चित बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृ’त्यु प्र’क’र’ण जटिल बन्दै गएको छ। उनले आ’त्म’ह’त्या गरेको विषयमा सीबिआइले जाँच गरिरहेको छ । सुशान्तको मृ’त्युको कारण उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीसंग बयान लिने काम भइरहेको छ । त्यसैको आधारमा अहिले सुशान्तका पिता के.के सिंहको उजुरीको आधारमा सिबीआईले रिया चक्रवर्तीसँग छानविन गरिरहेको छ ।
हालै रियासँग सिबीआइले सत्य कुरा निकाल्ने कोशिस गरिरहेको छ । तर, रीयाले कुनै पनि प्रश्नको खुलेर जवाफ दिन सकेकी छैनन् । उनले कठिन अवस्थामा केहि प्रश्नका जवाफ फर्काएकी छन् । त्यस कारण पनि अव रियाको पोलिग्राफ (लाइ डिटेक्टर) टेस्ट हुन सक्ने बताइएको छ । पोलिग्राफ टेस्टपछि रियाले बोलेका कुराहरुको सत्य(असत्य सामुने आउने प्रहरीको दाबी छ ।
सिबीआईले सोधेका ९ प्रश्नले रियालाई मुस्किल परेको छ । उनलाई सोधिएको प्रश्न जुन यस प्रकारको छ ।
१) तिमि सुशान्तको मृत्युको लागि आफुले आफुलाई कति जिम्मेवार सम्झिन्छौ ? २) कतै सुशान्तको मृत्युको कारण तिम्रो अचानकको उपेक्षा त थिएन? ३) के तिमीलाई लाग्दैन, तिमि गएपछि सुशान्तले आत्महत्या जस्तो कदम उठाउछन भनेर ? ४) सुशान्तलाई छोडेर जाने बेलामा कसैलाई भनेर जानुपर्छ भन्ने मनमा लागेन ?
५) कुनै बेलामा के सुशान्तले तिमीलाई यो भनेका थिए कि ‘उनि आफुले आफुलाई खतम गर्न सक्छन’ ? ६) के तिमि सुशान्तसँगको लिभिङ रिलेसनमा एक पत्नी जसरी बसेकी थियौँ ? ७) तिमीलाई उसको मानसिक अवस्थाको बारेमा राम्रो जानकारी हुनुपर्दछ ?
८) तिमीले आफ्नो कुनै जिम्मेवारी निभाइनौ, त्यसकारण हामि सुशान्तलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गरेको आरोपमा तिमीलाई किन गिरफ्तार नगरौँ ? ९) यदि तिमि निर्दोष छौँ भने कुनै पनि वैज्ञानिक परिक्षा दिन तयार हुन्छौँ ?